umatshini welayisi i-husker uyathengiswa,elona xabiso lililo lomatshini wokucheba i-husking fumana irayisi emhlophe
Umatshini welayisi we-husker wenzelwe ukuba wahlukane ne-paddy kwirayisi e-brown kunye ne-paddy kumgaqo-siseko we-density.this irayisi ye-husking yomatshini inokuxhotyiswa ngomnye umatshini we-paddy irayisi ye-husker,Emva kokulungiswa ,irayisi inokwahlulwa ibe 2 chwetheza ,irayisi emhlophe kunye ne-husk emdaka,sisizukulwane esitsha irabha roller husker esekwe ekuphuculeni umatshini wokutya we-semi-automatic husker yasekuqaleni. Inika iimpawu zokuzenzekelayo eziphezulu, Iziphumo ezilungileyo zetekhnoloji kunye nokusebenza ngokulula kunye nokusetyenziswa kwayo yimveliso ehlaziyiweyo yomzi mveliso wokulungisa irayisi.
Paddy umatshini welayisi isebenzisa iziqwenga ezibini zerabha njengesixhobo sokwaphula irayisi engavuthelwanga. Zombini iirowu zifakwe kufutshane (ngokufanayo) ngomgama othile kwaye ujikeleze kwizantya ezahlukeneyo kwicala elahlukileyo. I-roller ejikelezayo kwisantya esiphezulu ibizwa ngokuba ngama-roller eziphambili okanye i-roll roll, lo gama omnye umqulu ubizwa ngokuba ngabaqengqelezi abancedisayo okanye roll eshukumayo. Owona msongo uphezulu uxhonywe kwisitishi sesitaliya ngelixa umqengqeleki ongumncedisi abekwe eshafini ekuma esikhundleni sakhe esinokutshintshwa ukuze kulungiswe umgama (isikhewu) phakathi kolu luhlu zombini. Isantya sokwenza okukhawulezayo kufuneka sinciphe malunga 24% kolawulo oluphambili.
Iimpawu zomatshini we-paddy irayisi i-husker
1.Umatshini wokucheba irayisi ngumatshini wokucheba iinkozo othatha iinkozo zerayisi kwiqokobhe lakhe kwaye uzenze zibe rayisi emdaka. Isetyenziselwa i-hus husing, Ukulungiswa kwesisu kunye nengqolowa, njl.
2.Ingasusa iqokobhe le-husk, ukunciphisa ubungakanani yerayisi kunye nomonakalo wolusu, kwaye zama ukugcina irayisi emdaka ingasebenzi kwaye igcina ukutya okuphezulu kwerayisi.
3.Umatshini weRice husker unexesha elifutshane lokusebenza, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, inqanaba eliphezulu lokuxhuma kunye namandla angaphezulu erayisi.
4.Imitha ngaphandle kommese yenzelwe ngokukodwa ukuqokelela imveliso yamakhoba, ezilungele ukucocwa kwerayisi kunye nokucima ukubonakala kwe-bran encinci kunye nomgubo.
5.Umatshini wokucheba irayisi uxhamla ngokukhuselekileyo, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
6.Unokukhetha phakathi kwenjini yombane kunye injini yedizili.
Nxibelelana nathi ngomatshini wokuthengisa irayisi i-husker